Formstack: Dropbox တွင်ပုံစံတစ်ခုကိုထည့်ပါ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2013 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ဖိုင်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်မျှဝေရန်နေ့စဉ်နီးပါးကျွန်ုပ်တို့ Dropbox ကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များတွင် Dropbox အကောင့်တစ်ခုမရှိကြပါ။ သို့မဟုတ်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမူဝါဒများကသူတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုပါ။ သူတို့အားဖိုင်များစုဆောင်းရန်, ငါတို့နှင့်အတူပုံစံတစ်ခုသာ မင် (ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာပံ့ပိုးသူများ) နှင့်ပုံစံကိုပေါင်းစပ် Dropbox ကို.
Dropbox ကိုသင်၏ပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အခြားကျန်ရှိသည့်နည်းတူဆွဲချပါ မင် လွယ်ကူပါတယ်။
ယင်းသို့သွားရန် သတ်မှတ်ချက်များ သင့်ရဲ့ Form ကိုအပေါ်။
ယင်းသို့သွားရန် ပေါင်းစည်းမှု Hub.
ကို Select လုပ်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပြီးတော့ ထည့်စရာပုံးထည့်ပါ.
လျှောက်လွှာကိုခွင့်ပြုပါ၊ သင့်ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Tags: dropboxဖိုင်တင်ပို့ပုံစံပုံစံများပန်းချီပေါင်းစည်းမှုအချက်အချာTech မှတင်တင်ပုံစံ
ဗီဒီယို - မီဒီယာကိစ္စများ
25:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 01
ကောင်းတယ် ငါနောက်မှကိုးကားဘို့ Evernote နှင့်အတူဤ clipped ။